2019 #NABShow: I-Product Spotlight: HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, Umsasazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » 2019 #NABShow: I-Product Spotlight: HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design
2019 #NABShow: I-Product Spotlight: HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design
I-HyperDeck Extreme 8K HDR entsha Blackmagic Design isetyenziselwe ukuba isisombululo esipheleleyo soluhlu olusasazayo kwisizukulwana, ukuveliswa kwemveliso kunye nezicelo zobungqina bedijithali. Yenzelwe ukudibanisa, i-HyperDeck Extreme 8K HDR ingasetyenziswa njengomdlali we-clip, umrekhodi we-ISO wekhamera, kunye / okanye i-record record. Kwakhona, iziphumo ze-analog ziza kuvumela ukuba amateyipu adala asetshenziswe ukuba asetyenziswe ekuhleleni okanye kwinkonzo yokuhambisa. Eyilwe nge-10G Ethernet, i-HyperDeck Extreme 8K HDR, iyanda isivinini sokulayishwa kwamajelo okukhawuleza. Xa isetyenziswe njengomgcini werekhodi, inye iquka HDMI, I-SDI kunye neempembelelo ze-analog kunye neziganeko ezakhelwe kunye ne-3D LUTs!
I-HyperDeck Extreme Control izisa abasebenzisi abaphathi bendabuko bendawo yokuhambisa ipakethe kunye ne-shuttle knob enkulu! Ukufakela amabini amajelo eendaba, i-Quad 12G-SDI ye-8K, ukuxhumeka kwe-analog yokugcina indawo, i-USB-C yangaphandle yokurekhoda kwediskhi, isithethi sephambili sangaphambili kunye nokufakwa kweefowuni kunika abasebenzisi ngemimiselo engaphezulu. Kwakhona, yenzelwe kwi-studio okanye kwindawo yendawo inxibelelwano lwe-AC kunye ne-DC. Umlawuli we-RS-422 unako lawula uluhlu olubanzi lweentsika, kuquka i-Digital Betacam, ifomathi ye-1 intshi C, kunye ne-Betacam SP, ephelele kumsebenzi wokugcina indawo kunye nokuguqula phakathi kwamafomathi.
Iyunithi nayo ibonisa amakhadi amancinci e-CFast yamashishini ekurekhodwe ngaphandle kokurekhoda. Iifayile zeH265 zincinci, ngoko zirekhoda iiyure kumgangatho oqhelekileyo weCFast ikhadi linokwenzeka! NgeH265, unokurekhoda imizuzu ye-498 kwi-8Kp60 kwikhadi le-TB ye-1, imizuzu ye-1,059 kwi-2160p60 Ultra HD kunye nemizuzu ye-2,354 kwi-1080p59.94 kwikhadi le-TB ye-1. Iphezu kweeyure ze-8 kwi-8K nangaphezulu kweeyure ze-39 HD! Ukucima amafayile ahlahlileyo i-HyperDeck Extreme 8K ine-disk flash disk ukuze isetyenziswe njenge-cache irekhodi, i-cache iya kuthatha ngokuzenzekelayo ize irekhode nayiphi na imidiya ayinakuyenza. Eyakhelwe kwiindawo ezize zitshintshele kwi-HDR imiba xa isebenza kwiifom ze-HDR! Iifayile zifakwe ngolwazi oluchanekileyo lwe-HDR ngoko-SDI kunye HDMI iziphumo ziya kuthobela ngokuzenzekelayo imilinganiselo yevidiyo ye-HDR. Iimethadatha ezisisigxina ze-PQ ne-HLG zenziwe ziphathwe ngokwemiqathango ye-ST2084. I-LCD ekhanyayo inebala lombala olubanzi ukuze inokusingatha zombini iRe Rec. 2020 kunye neRe Rec. 709 imibala yemibala. Eyakhelwe kwi-HyperDeck Extreme 8K HDR i-LCD yombala i-gamut inokuphatha i-100% yefomathi ye-DCI-P3.
Tyelela Blackmagic Design kwi2019 #NABSikhombisa tafula #SL216 imiboniso kunye nezicelo.
malunga NAB Bonisa
NAB Bonisa, eyayibanjwe ngo-Ephreli 6th-11th, i-2019 eLas Vegas, iyona nto ibalulekileyo yezobugcisa bekhompyutha ekhusele indalo, ukuphathwa nokuhanjiswa komxholo kuwo onke amapulatifomu. Ngabantu abangama-103,000 abavela kwii-166 kumazwe kunye nemibukiso ye-1,700, NAB Bonisa yindawo yokuthengisa ngokugqithiseleyo kwimidiya yedijithali kunye nokuzonwabisa. Kususela ekudalweni kuya kusetyenzisweni, kwiiplanga ezininzi kunye namazwe angenakubalwa, #NABSikhombisa I-2019 ikhaya kwiisombululo ezigqithiseleyo ukusasazwa kwendabuko kunye nokwamkela ukuhanjiswa kokuqukethwe kwizikrini ezintsha ngeendlela ezintsha.
Umbutho kaZwelonke wabashumayeli ngumanyano wokubhengeza oonkulumbuso kwabasasazo baseMerika. I-radio ye-NAB inomathotholo kunye nomdlaliso kumabonwakude kwimicimbi yomthetho, yomthetho kunye noluntu. Ngokukhuthaza, imfundo kunye nokutsha, i-NAB yenza abasasazo bakhonze ngokufanelekileyo uluntu lwabo, baqinise amashishini abo kwaye bathathe amathuba amatsha kwixesha ledijithali. Funda ngakumbi kwi www.nab.org.
Ukusasaza Beat kuyinto uMsasazo oPhathelene ne-2019 NAB Bonisa e Las Vegas kunye noMvelisi we NAB Bonisa PHILA.
UMatthew usebenze kumacandelo abucala kunye nemfundo ephakamileyo kwiminyaka engaphezu kwemashumi mabini. Uxhomekeke kwimimandla yolawulo lweprojekthi yedijithali, ukusasazwa kwebunjineli kunye nemveliso yemidiya. UMateyu unolwazi olubanzi kwimveliso yeposi yedijithali, ukuphathwa kweefayili yedijithali, ukuvelisa i-digital cinema, kunye nokusasazwa kwezixhobo. UMnu Harchick uphanda ngokuphandle imeko yezobugcisa bokusasazwa, ukucoca i-digital cinema kunye nobuchwephesha bokubuyiselwa kobugcisa bokuboniswa komxhasi kwaye kuyafumaneka kwiimfuno zakho zokubonisana.
2019 #NABBonisa njani: I-Spotlight: I-HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design - Aprili 8, 2019
2019 #NABBonisa njani: I-1 Billion kunye nokubala, i-SPROCKIT ivakalisa ukugqibela kwe-Startups! - Aprili 3, 2019
2019 #NABSikhombisa I-Adobe Izisa iHuge Creative Cloud Release! - Aprili 3, 2019
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zoBasazo Umagazini we-Broadcast Beat Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 imisebenzi yokubonisa NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo	2019-04-08
Previous: Iimidlalo ze-Epic 'I-Unreal Engine Iyanceda i-Emmy yobuGcisa kwaye ibonakaliswe kwiNgxowa-ntengiso ye-50 kwiNAB 2019
next: Ukuzisa iSikimu soPhuhliso kunye neZapier Integration
Imveliso yexesha elipheleleyo / uMyili wemizobo
Injineli eyiNtloko / Iinkonzo zoBuchule UMlawuli-OKC 191007-UNCB-118